Tag: Istanbuul | Sagal Radio Services
11 ruux oo ku geeriyootay qarax ka dhacay bartamaha magaalada Istanbul
Sagal Radio Services • News Report • June 7, 2016
Qarax baabuur oo lagu weeraray gaari bas ay booliska Turkiga lahaayeen ayaa waxaa ku dhintay 11 ruux bartamaha magaalada Istanbul.
Ruto oo u sheegay shirweynaha Turkiga in dowladiisu ay ka go’an tahay in la xiro xerada Dhadhaab
Madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto ayaa u sheegay shirka caalamiga ah ee maanta ka furmay dalka Turkiga in dowladiisu ay ka go’an tahay in ay albaabada isugu dhufato xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Hogaamiyaasha dalalka Muslimka oo ku kulmaya magaalada Istanbul (Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • April 15, 2016
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa martigelinaya inkabadan soddon hogaamiye oo ka socda wadamada Muslimka ah iyadoo shirweyne 2 maalmood soconaya uu ugaga furmay magaalada Istanbul.
Daawo Sawirro ku saabsan Shirka Istanbul ee Arrimaha Soomaaliya
Shirka Diirad Saarida Arrimaha Soomaaliya oo shalay ka furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa ka koobnaa qeybo kala duwan, waxaana shirkan ka qeyb galay Madax Soomaaliyeed, Madax ka socotay Beesha Caalamka iyo wakiilo ka socday Hey’ado caalami ah.
Daawo Sawirada: Madaxweynaha Turkiga oo goor dhow furay Shirka looga hadlayo arrimaha Soomaaliya (Sawirro)
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan ayaa goor dhow magaalada Istanbul ka furay shirka Madasha 6aad ee heerka sare ee Soomaaliya iyo Beesha Caalamka, kaasoo looga hadlayo arrimaha amniga iyo siyaasada Soomaaliya.
Madaxweynaha oo ka qeyb galay Xus loo sameeyay sanad-guuradii 100aad ee dagaalkii 1aad ee Adduunka
Madaxweynha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Istanbul, madaxda caalamka qaarkood kala qeybgaley xuska sannadguuradii 100-aad ee ka soo wareegtey dagaalkii Turkiga, waagii Boqortooyada.
Sagal Radio Services • News Report • March 2, 2015
Wafdiga Somaliland u matalaya wada hadalada Istanbul ayaa mar kale diiday inay hor fariistaan xubno ka mid ah wafdiga dowladda Soomaaliya, iyadoo dadaalo tan iyo xalay ay wadeen Mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibada Turkiga oo ku saabsanaa sidii xal loogu heli lahaa caqabada taagan ay guuldareysteen.